Nhau - Kunyorera zvakanakira laser kucheka tekinoroji
Application zvakanakira Laser nokuveza michina
Laser yekucheka tekinoroji ndeye yakazara yepamusorosoro tekinoroji, iyo yakasanganisa iyo optical, zvishandiso sainzi uye mainjiniya, michina kugadzira, kusanganisa kudzora tekinoroji uye zvemagetsi tekinoroji uye zvimwe zviraidzo, parizvino, ndiyo inopisa nzvimbo inowanzoonekwa kunetsekana kwesainzi & tekinoroji yeindasitiri uye maindasitiri. madenderedzwa, vese kumba nekune dzimwe nyika. Kwemakore anopfuura makumi mashanu, laser kugadzira uye kunyorera kuchikura nekukurumidza, kwakabatana pamwe nekuranga kwakawanda fomu kuita huwandu hwekushandisa kumisikidzwa, uye laser main kugadzira matekinoroji anosanganisira: laser yekucheka, laser yekunamatira, laser yekumaka, laser kuchera, Laser kupisa kurapwa, laser kukurumidza prototyping, laser kupfeka uye zvichingodaro.
Laser yekucheka tekinoroji ndiyo huru yekushandisa laser tekinoroji muindastiri. Iyo inowedzera kushandurwa kwetsika kugadzira indasitiri uye inopa nzira nyowani yezvazvino maindasitiri kugadzirisa. Yakave inonyanya kushandiswa nzira yekugadzirisa laser muindasitiri yekugadzirisa munda. Parizvino, laser yekucheka tekinoroji yave ichishandiswa zvakanyanya mukugadzira michina, kuvakwa kwebhiriji, kugadzirwa kwesimbi, ngarava uye kugadzira mota, maindasitiri emagetsi nemagetsi, avhiyesheni uye muchadenga uye mamwe maindasitiri epasi ezvehupfumi. Nekuenderera mberi kwesainzi uye tekinoroji uye kunyorera, laser yekucheka tekinoroji ichaenderera mberi kune dzimwe nzvimbo.
Mumakore achangopfuura, laser yekugadzira tekinoroji iri kukura nekukurumidza zvikuru. Kushanda kwaro kuri kuwedzera nekuwedzera zvakanyanya. saka iyo laser inozivikanwa se "universal processing tool" uye "ramangwana kugadzira system yakajairika nzira zvinoreva". Yepamberi maindasitiri nyika yekugadzira tekinoroji iri kuita shanduko yemhando yepamusoro nekuda kwekushandisa kwakanyanya kwe laser kugadzira tekinoroji. Laser yekucheka tekinoroji ndiyo huru yekushandisa laser tekinoroji muindastiri. Yakawedzera shanduko yetsika yekugadzirisa indasitiri uye yakapa nzira nyowani dzekugadzirisa kwemaindasitiri emazuva ano. Yakave inonyanya kushandiswa nzira yekugadzirisa laser muindasitiri yekugadzirisa munda, iyo inogona kutora rese laser kugadzira indasitiri inopfuura 70%.
Laser yekucheka iko kushandiswa kweakakwirisa emagetsi emagetsi laser danda rinojekesa iro rekushanda. Pasi pechirevo chekupfuura laser chikumbaridzo chemagetsi emagetsi, laser danda simba uye inoshanda gasi kubatsira kutema maitiro akabatanidzwa nemakemikari maitiro kupisa ese anopinzwa nechinhu. Iyo tembiricha yeiyo laser chiito poindi inokwira zvakanyanya uye mushure mekufashaira poindi yasvika, zvinhu zvinotanga kuita vaporize uye zvinogadzira gomba. Nechavo kufamba kwechiedza danda uye workpiece, izvo zvinhu pakupedzisira zvinoumbwa kuita kutsemuka. Iyo sediment pane yakatsemurwa inopepereswa neimwe giyeti gasi.
Laser yekucheka ine zvakwakanakira zvakati wandei senge rakasiyana siyana rekucheka, kumhanyisa kumhanyisa, kutsemura yakamanikana, yakanaka yekucheka mhando, diki kupisa nharaunda yakakanganiswa, pamwe inochinjika uye nezvimwe. Aya mabhenefiti anga ari akasiyana siyana ekushandisa mumaindasitiri emazuva ano. Laser yekucheka tekinoroji zvakare yave imwe yeakanyanya matekinoroji mu laser kugadzira tekinoroji. Zvichienzaniswa nemamwe mwenje, heano mamwe maficha seinotevera:
1. Kupenya kwakakwirira
3. Yakakwirira monochrome
4. Kubatana kukuru
Zvakare nekuda kwezvinhu izvi zvina, yanga ichishandiswa zvakanyanya, uye yaunza zvakakosha pazvinhu zvinotevera zvetsika kugadzirisa kune laser kugadzira:
(1) Sezvo pasina kuonana kugadzira, uye Laser danda simba uye kufamba kumhanya zviri chinjika. Saka iwe unogona kuwana akasiyana siyana ekugadzirisa.
(2) Inogona kushandiswa kugadzirisa simbi dzakasiyana, isiri yesimbi. Kunyanya, inogona kugadziriswa kukwirira kuomarara, kukwirira brittleness uye kwakanyanya kunyauka kwechinhu.
(3) Iko hakuna "chishandiso" kupfeka panguva yekugadzirisa laser, uye hapana "yekucheka simba" inoshanda pane yekushandira.
(4) Laser yekugadzirisa yeiyo workpiece kupisa inokanganisa nzvimbo idiki, diki deformation yeiyo workpiece, yekutevera-mudiki mashoma ekugadzirisa.
(5) Iyo laser inogona kugadzirisa iyo workpiece mune yakavharwa mudziyo kuburikidza neyakajeka svikiro.
(6) Iyo laser iri nyore kutungamira. inogona kuwanikwa mukutungamira kweshanduko kuburikidza nekutarisa. Zviri nyore kwazvo kushandira pamwe neCCC system yekugadzirisa zvikamu zvakaoma. Naizvozvo, laser yekucheka inzira inocheka yekucheka nzira.
(7) Laser kugadzira ine yakakwira kugadzirwa kunyatsoita. Processing mhando yakatsiga uye yakavimbika, yakakosha hupfumi uye magariro mabhenefiti.
Isu tine tarisiro yekupa yakakosha matekinoroji uye akagadziridzwa ekubatanidza mhinduro eindasitiri 4.0 uye akangwara mafekitori, kubatsira mabhizinesi kuti ashandise zvakakwana mikana yakawanda inomuka mudhijitari zera.